Taom-baovao iraisan’ny Malagasy Tena mila firaisankinan’ny rehetra, hoy ny tangalamena Zakariasy
Tena vanim-potoana ilàna ny firaisankinan’ny samy Malagasy izao hanandratana avo ny firaisankinam-pirenena hoy ny tangalamena Zakariasy Patrick omaly nandritra ny tafa nataony ho an’ny mpanao gazety.
Mifanandrify indrindra amin’ny taom-baovao iraisan’ny Malagasy andiany fahatelo hatao any Toamasina izany ny 20 ka hatramin’ny 22 septambra ho avy izao, tafiditra ao anatin’ny vanim-potoanan’ny lohataona. Ny lohataona mantsy no fiandohan’ny hazavana aty amin’ny ilabolan-tany atsimo ka mamohamandry ny natiora araka ny fanazavany, antony nisafidianana io daty io. Tsy hanavahana foko sy fiaviana na finoana ny hetsika ary tsy manaraka ireo fankalazana taom-baovao isam-poko na isam-paritra amin’ny vanim-potoana mahamety azy. Tsiahivina moa fa tamin’ny 22 septambra 2017 no nanaovana ny andiany voalohany amin’ny fankalazana ny Taom-baovao Iraisan’ny Malagasy izay natao teto Antananarivo ary nananganana ny Orimbato hita etsy amin’ny araben’ny fahaleovantena atsy Analakely. Tany Fianarantsoa no nanaovana ny fankalazana tamin’ny taona 2018 raha any Toamasina no hanaovana ity andiany fahatelo ity any an-drenivohitr’i Betsimisaraka. Vahiny manodidina ny 500 raha kely no andrasana amin’izany.